ADD MORE LELEE
Were ihe ma jiri isi ihe.
Nkwalite kwa izu
Lelee koodu site DHL
Lelee code EMS
Safety akpụkpọ ụkwụ
okpu agha Safety
Echebe ájá na ọgwụ
Ọdịdị okporo ụzọ
Ntọala dara site na elu.
Akpụkpọ ụkwụ Ngwa
Iko n'ihi na dọkịta
Back Support echebe Mmadụ
Ụkwụ dọkịta na ndị nọọsụ
Akpụkpọ ụkwụ ukwu
Weghachite iwu Na nnọchi
Ị nwere ike ịlaghachi ma ọ bụ gbanwee ngwaahịa ahụ n'ime ụbọchị 14 ma ọ bụrụ na achọghị aha ngwaahịa ahụ. E tinyebeghị ya. Ọ bụrụ na ị bia mgbe ụbọchị. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike ịlaghachi ma ọ bụ gbanwere ngwaahịa ahụ n'aka onye ahịa.
1 E tinyebeghị ya. Ihe na-etinye ma ọ bụ kechie plastik Agaghị adọwa ma dọbisịa. Ngwaahịa ga-adị na ngwugwu mbụ.
2 Anyị ga - achọ ịgbanwe ma ọ bụ laghachi ngwaahịa na ndị mmadụ n'ozuzu ha anaghị ekere òkè dịka akpụkpọ ụkwụ, ákwà, akwa, mgbochi ntị, wdg. Ụlọ ahịa ahụ jụrụ ịgbanwe ọ bụla ikpe.
Tinyere ụdị ngwá ahịa ndị a.
- Ngwaahịa zụrụ site na ego ego.
- Ego puru iche Nkwalite
- Ịkekọrịta ihe ndị metụtara ahụike nwere ike ịfe.
3 Ụlọ ahịa ahụ ga-ajụ maka ihe akaebe nke nnata. Biko weta nnata ya na ihe.
4 Biko ezipụla ngwaahịa ga-anọchi ma ọ bụ laghachi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ. Ọ bụrụ na izigaghachi ihe ahụ n'onwe ya.
5 Ngwaahịa a ga-azọrọ ma ọ bụ laghachi ga-ezigara na ụlọ ahịa n'ime 7 ụbọchị mgbe kọntaktị. Ma ọ bụghị ya, anyị agaghị ekwu ma ọ bụ laghachi ngwaahịa ahụ n'aka onye ahịa n'ọnọdụ ọ bụla.
Nkwụghachi ma ọ bụ ngbanwe
Ọ bụrụ na ị nyochaa njirisi. Anyị ga-ezitere gị email, ekwentị, ma ọ bụ email. Ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ ezughị oke. Anyị ga-agba ọsọ ịlaghachi.
1 ga-akwụghachi ndị ahịa ego. Ọ bụrụ na onye ahịa akwụ ego. Anyị ga-akpọtụrụ gị iji nyefee ego azụ. Ndị ahịa ahịa kaadị akwụmụgwọ. Anyị ga-agbapụta ego n'ime 14 site na channelụ ndị ahịa ji akwụ ụgwọ na kaadị.
2. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ enwetaghachi oge nkwụghachi ma ọ bụ akwụghachi ya.
Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ enwetaghị nkwụghachi. Biko lelee ego gị. Ụlọ ọrụ kaadị akwụmụgwọ na-ejikwa n'aka. Kedu kaadị akwụmụgwọ mgbe niile ga-ewepụta oge iji meziwanye nguzozi n'ọnwa ọzọ. Ọ bụrụ na ị chere na ọ bụ ma ọ bụ ogologo oge. Biko kpọtụrụ email. sales@lrmsafety.com.
Ngwaahịa ga-agbanwe ya. Ga-abụ ụgwọ mgbe niile. Anyị debere ikike ịgbanwe ngwaahịa ma ọ bụ nkwụghachi ma ọ bụrụ na ndị ahịa zụta ngwaahịa na ọnụahịa ndị pụrụ iche.
Anyị ga-agbanwe ngwaahịa ahụ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ mebiri ngwaahịa ahụ. Enwere ike ghara ịfe ahịa n'ihu onye ahịa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime mkpesa, mee nloghachi. Biko kpọtụrụ sales@lrmsafety.com Ma ọ bụ kpọtụrụ onye na-ere ahịa gị.
Ọ bụrụ na ezitere ihe dịka onyinye. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe nha. Gbanwee ngwaahịa Anyị ga-agbapụta ma ọ bụ gbanwee ihe ahụ na mbupu a kapịrị ọnụ. Ọ bụrụ na anyị ga-ezite ya. Enwere m email iji mee ka ị mara. Anyị alọtalarị.
Ọ bụrụ na anaghị edepụtara ihe ahụ dị ka ihe onyinye, mgbe a zụrụ ya, anyị ga-akwụghachi ma ọ bụ gbanwere ihe ahụ. A ga-enwe ọkwa nye onye natara ya banyere nnọchi ma ọ bụ nloghachi.
Biko laghachi na 42 / 11 6 12150 XNUMX XNUMX Thailand
Ndị ahịa na-akwụ ụgwọ maka nloghachi, mgbanwe maọbụ azọrọ. Anyị agaghị eburu ụgwọ maka mbupu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi ngwaahịa ma ọ bụ gbanwee ngwaahịa. Anyị ga-akụtu ụgwọ ebubo ma ọ bụ ụgwọ ebubo ọzọ.
Na-adabere na anya, adreesị mbupu. Oge nnyefe nwere ike ịdịgasị iche dabere na nzi ozi nzi.
Ọ bụrụ na iziga ngwaahịa na-efu karịa 1,000, ị ga-eziga ya site na EMS iji hụ na e nwere mkpuchi maka ozi efu. Ọ bụrụ na a laghachiri ihe gị n'ihi na ịnọghị n'ụlọ ma ọ bụ site na mail, biko gaa na adreesị mbupu gị. Mana onye natara anaghị anọ n'ụlọ. Enwere ike ịba uru. Anyị agaghị enwe ụgwọ maka ụgwọ.
Lelee usoro iwu
Iwu & Iwu
© 2018 บริษัทเหลืองรัศมี จำกัด. ลิขสิทธิ์ โดย LRMsafety.com. Ikike niile echekwabara
Abanye na-ahụ Top họpụta mmadụ maka gị!
Ọ dịghị ihe ga-gwa n'ihi gị.
Na ntukwasi-obi kwadoro site
Loading Top họpụta mmadụ...
Họrọ a enyi ...